China Abicah irabha Sheet Kuba abavelisi Solaminator Solar kunye nabathengisi | UCayce ngoMeyi
Umgangatho bubomi beshishini. Inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu kulawulo lomgangatho wemveliso. Ineqela labasebenzi abasemgangathweni wolawulo lomgangatho, baxhotyiswe ngeelebhu zemveliso yobungcali, amagumbi okuvavanya, kunye neelebhu.
Umgangatho bubomi beshishini. Inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu kulawulo lomgangatho wemveliso. Ineqela labasebenzi abasemgangathweni wolawulo lomgangatho, baxhotyiswe ngeelebhu zemveliso yobungcali, amagumbi okuvavanya, kunye neelebhu. Ngexesha lenkqubo yemveliso, ibambelela kwimveliso esemgangathweni kwaye iyonwabisa ngokungqongqo ilizwe kunye nomzi mveliso. Imigangatho kunye nemigangatho yemigangatho yokwenza ukuba iimveliso zihlangabezane neemfuno zomsebenzisi. Iimveliso zeNkampani yaseCaycemay zibandakanya zonke iintlobo zemisebenzi eveliswa ngabantu kwilizwe liphela, kwaye ezinye zeemveliso ziye zaphesheya nakwilizwe liphela. Isikali semveliso, umgangatho, ixabiso, ukuhanjiswa, kunye nenkonzo ziphumelele indumiso ephezulu evela kubathengi kwaye bonwabele igama eliphezulu.
Iimveliso zenkampani zijolise kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu, kwaye zizama ukucola kunye nokufunxa itekhnoloji yamanye amazwe ukubuyisela ukungenisa ngaphakathi kunye nokunyusa izinga lasekhaya. I-tarpa-retardant-retardant yezithuthi zikaloliwe inikezelwe kwiinkampani zangaphandle. Amashiti e-silicone ahlala kwisiqingatha samabala kwi-laminators yelanga, iglasi, ukhuni, iimethi zamakhadi, njl .; izinto zokutywina zerabha kwishishini le-petrochemical ziye zonwabela igama eliphezulu;
Iphepha le-silicone yerabha yelaminator yelanga, i-Caycemay iphepha elinqabileyo elineenyembezi lisebenzisa izixhobo ezaziwa kwihlabathi liphela, itekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi kunye nokuveliswa kwezixhobo ezikhethekileyo zemveliso, imveliso inokuzinza okuphezulu kunye nokuthembeka, kwaye isetyenziselwa i-laminators yelanga, njl. izixhobo
Le mveliso yazisa i-asidi-enganyangekiyo, enganyangekiyo ngaphakathi, enobushushu obuphezulu obunganyangekiyo kwindalo eqinisiweyo kunye nezinto ezikhethekileyo zesakhelo ngokusekwe kwibhodi ye-silica ye-silica engqongileyo. Ngokwenjenje, amandla okuqina, amandla okondla, kunye nozinzo lwenqanaba leplate ye-silicone iphuculwe kakhulu, kwaye ubomi benkonzo yemveliso buqhubeka.
Kwakhona kunenzuzo yokuba xa iphepha leerubha lisetyenziselwa umda, aliyi kubangela umonakalo kwimodyuli yeseli yelanga. Ububanzi obukhulu bunokufikelela kuma-4000mm ngaphandle kwemisonto.
Ukuqina (Unxweme A) 60 ± 2
Ukukrazula amandla Mpa≥ 10.5
Amandla eenyembezi N / mm≥ 40
Ubushushu ukumelana ℃ 200
Ukumelana ne-EVA (xa kuthelekiswa) Kulungile
Egqithileyo Abicah irabha Cushion yokwenza iLaminator yeKhadi
Okulandelayo: Iphepha leRabha yeSilicone yeMveliso yeGlasi
3mm ngerabha Sheet
Sheet ngerabha Sheet
Iphepha leRubber leGum
Iphepha leRabha leSilicone eliPhakamileyo
Iphepha leRubber leNdalo
Iphepha leRubber eliQinisekisiweyo
Iphepha leRubber leSilicone